सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार? - Everest Dainik - News from Nepal
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
काठमाडौं, साउन १९ । सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुन तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर ६६ हजार ३ सय पुगेको हो।
शुक्रबार ६५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार ५ सयले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सोमबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य
यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। चाँदी तोलाको ७७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किदै गर्दा बाटोमै मृत्यु
८२ लाखमा मन्त्रीनिवासमा जिमखाना बनाइँदै